Heshiisyada shaqada biraha ee wadajirka ah ee Spain | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Heshiisyada shaqada ee wadajirka ah ee birta ee Isbaanishka
Gorgortanka heshiisyada wadajirka ah Waxay ahaayeen arrin muhiim ah oo ay tixgeliyaan shaqaalaha ka shaqeeya agabkan waxyaabo kala duwan hawlo shaqo waxayna ku heshay sumcad mahadsanid xaqiiqda ah inay si heer sare ah uga wada hadlayaan gorgortanka gorgortamayaasha iyo inay waqti dheer ku qaataan inay heshiis gaaraan, ilaa laga saxiixayo.
Waa heshiisyo shaqo kuwaas oo mas'uul ka ah xakamaynta iyo nidaaminta adeegsiga biraha ee ka jira deegaannada kala duwan ee dalka, kuwaas oo ay qorsheeyeen oo abaabuleen gorgortamayaal kala duwan oo gobolka ka tirsan isla markaana gaadha heshiis wada jir ah waqti cayiman.
El ujeedada ugu weyni waa: fududee gorgortanka wadajirka ah ee qaybta birta, Ujeedada ururada iyo loo shaqeeyeyaashu ay iyagu is dejiyeen, waana sababta ay u saxeexeen heshiiska loo yaqaan heshiiska shaqada ee warshadaha biraha, dukumiinti ay ku jiraan ka wada xaajoodka arrimaha guud si loo xakameeyo khataraha shaqada iyo tallaabooyinka sinnaanta ee shirkadaha dhexdooda, oo ka baxa xilligan, heer gobol, arrimo kale sida mushahar ama urur shaqo.
1 Maxay u jirtaa heshiis lagu xakameynayo adeegsiga qalabka guud?
2 Maxaa si gaar ah loogu nidaamiyaa heshiisyada wadajirka ah ee biraha?
2.1 Heshiiskii ugu horreeyay ee gobolka ee warshadaha, tikniyoolajiyadda iyo adeegyada waaxda birta ee Spain
3 Muxuu CCOO ka qabaa arrintaas?
4 Sababaha hor istaagay heshiiska wadajirka ah
Maxay u jirtaa heshiis lagu xakameynayo adeegsiga qalabka guud?
Qaababka qandaraaska, saacadaha shaqada ee sanadlaha ah iyo xaaladaha sinnaanta; Kuwani waa qaar ka mid ah arrimaha in, hadda laga bilaabo, loo shaqeeyaha biraha iyo ururada bulshada ay ka wada xaajoodaan hal mar oo keliya, marka loo eego saddexdii jeer ee hore: heshiisyada Huesca, Teruel iyo Zaragoza.
Tani way ku caawin doontaa fududee oo mideeya gorgortanka wadajirka ah, maaddaama arrimahaas ay ahaayeen kuwo caam ah, marka lagu daro ka mid ahaanshiyahana ma ahayn ujeeddada isku dhaca, laakiin waxay ahaayeen gorgortanka gobollada ee heshiisyada.
Arimaha sida mushaharka ama saacadaha dheeraadka ah ayaa u gaar ah heerka gobolka. Iyadoo heshiiska guud ee Warshadaha birta Aragon talaabada ugu horeysa ee loo qaadayo mustaqbalka waa la calaamadeeyay, si maalin un ay u dhacdo hal heshiis bulshada dhexdeeda. Qeyb ay ka mid yihiin warshadaha gawaarida, macdanta, tuubooyinka ama dukaamada dayactirka, waxaana ka shaqeeya 40.000 qof bulshada dhexdeeda. Bogagga waxaa lagu darayaa heshiiska si tartiib tartiib ah si ay u daboolaan mowduucyo aad iyo aad u muhiim ah.
Axdiyada kala duwan in lagu sameeyay xakamaynta iyo nidaaminta howlaha kala duwan ee la xiriira isticmaalka biraha ee gobollada kala duwan, Waxay ugu yimaadeen inay u shaqeeyaan si wanaagsan iyo sabab weyn oo ah wadahadalada qaar ee la qaado si loo xakameeyo xuquuqda xirfadeed, iyo sidoo kale waajibaadka saaran inuu qofku shaqaale ahaado oo uu maareynayo maadada sida birta.
Heshiisyo wadareed oo kala duwan laxiriira qawaaniinta adeegsiga shaqada birta sida kontorool dhanka waxqabadka howlaha kaladuwan, sida tuubada, qalabka, dahabka, nalalka, iyo wixii lamid ah.
Sida iska cad waxa jira iskaga mid ah heshiisyada biraha kala duwan kuwaas oo ay saxeexeen gorgortamayaashu, kuwanuna waa iskumid layaableh, laakiin sidoo kale waa inaan xusno in kala duwanaanshuhu uu si gaar ah uga dhex muuqdo deegaannada kala duwan ee heshiisyadan lagu dejiyay laguna saxeexay.
Maxaa si gaar ah loogu nidaamiyaa heshiisyada wadajirka ah ee biraha?
Waxaa jira xeerar kala duwan iyo heshiisyo kala geddisan oo lagaga wada hadlayo gorgortanka ku saabsan heshiisyada wadajirka ah, kaas oo gacan ka geysta in si dhow loo xakameeyo loona habeeyo howlaha birtu door muhiim ah ka ciyaareyso. Waxa la raadinayo ayaa badiyaa ah in la xakameeyo isticmaalka, xaaladaha lagu qabanayo howlaha, wax soo saar iyo waqtiga wax soo saar, intaas oo dhan si shaqaaluhu u raaco sharciyadan warqadda si uu u noqdo mid amaan ah markasta oo la qabanayo hawsha ama shaqada.
Shaqaaluhu waa inay aqoon buuxda u leeyihiin kuwan heshiisyada, xeerarkooda, ansaxnimada iyo waqtiga ay tahay in la fuliyo. Heshiisyada shaqada ee kaladuwan waxaa loola jeedaa xaalado kala geddisan, waxayna kuxirantahay deegaanka ama gobolka uu ku sugan yahay shaqaaluhu, dalabka ama ansaxnimada heshiiska shaqadu wuu ka duwanaan doonaa.
Heshiiskii ugu horreeyay ee gobolka ee warshadaha, tikniyoolajiyadda iyo adeegyada waaxda birta ee Spain
Ayaa lagu saxiixay heshiiskii ugu horeeyey ee warshadaha, kaas oo gacan ka geysanaya adkeynta gorgortanka wadajirka ah ee gobollada kala duwan ee dalka.
Heshiisyadu waxay yeelan doonaan ansaxnimadooda asalka ah, tan marka laga reebo heshiis muujinaya in sii socoshadoodu xadidan tahay.
Iyada oo gacan laga helayo tan cusub heshiiska shaqada qaybta birta, Waxay hubin doontaa in mushaharka lagu heshiiyo heshiis kasta iyadoo kuxiran gobolka loo saxiixay, tani waa mid waxtar leh haddii heshiis kasta uu joojiyo inuu shaqeeyo oo ansaxnimadiisa ay dhacdo, sidan oo kale shaqaaluhu waxay kusii wadi doonaan helitaanka mushaharkooda dhib malahan.
Tani way caawinaysaa shaqaalaha waa laga ilaaliyaa nooc kasta oo takoor ah Haddii ay dhacdo in mushaharkoodii hore loogu heshiiyey aan la keenin, iyo sidoo kale taageerada shirkadaha kala duwan ee u xilsaaran bixinta adeegyo kala duwan macaamiisha, fursad ay kula gorgortamaan oo ay ku gaaraan heshiisyo ka caawinaya dhammaan dhinacyada inay ku qancaan qandaraasyada la samaynayo.
UGT ayaa sheegay in saxiixa heshiiska uu yahay guul la taaban karo oo ay u arkeen sheegasho taariikhi ah oo ka dhex jirta ururka shaqaalaha, kaas oo ka caawin doona shaqaalaha inay si fiican ugu dhex horumariyaan qaybta biraha.
UGT sidoo kale waxay xustay in, "Waxaa ka mid ah waxyaabo ugub ah sida firfircoonaan ama ansaxnimo lagu heshiiyey heshiisyada heerka hoose, taas oo ogolaaneysa in wax heshiis ahi hoos u dhicin, hoos u dhigista wixii lagu oggolaaday dib-u-habeynta shaqaalaha."
Muxuu CCOO ka qabaa arrintaas?
CCOO waxay muujisay sida ay ugu qanacsan tahay heshiiska cusub. CCOO waxay ku jirtay hawsha abuuritaanka heshiis la mid ah muddo dheer, raadinta gobollada iyo shaqaalaha in laga ilaaliyo dhinacyo kala duwan oo la xiriira shaqada iyo ka shaqeynta gudaha warshadaha biraha ee Spain.
Dhab ahaantii cusub heshiis biraha Waa tallaabo aad muhiim ugu ah warshadaha, in kasta oo ay weli in badan u hadhsan tahay, halkan waxaan ka bilaabaynaa inaan gaarno gorgortan wanaagsan mustaqbalka, waana kuwan dhinacyada ay CCOO aqoonsatay inay muhiim tahay in la xuso.
Qodobbada kale ee muhiimka ah gudahood Heshiiska shaqada.
Heshiis ayaa la sameeyay oo la saxiixay oo ku saabsan mushaharka ugu yar ee qaybta gobolka, tan waxaa lagu muujiyey heshiis gobol kasta. Waxa ugu muhiimsan halkan waa in kasta oo ay jirto in heshiis gobol uu saameeyey ansaxnimada ama muddada heshiiska, waxay sii wadi doonaan inay bixiyaan mushaharka caadiga ah ee shaqaalaha iyo haweenka ka shaqeeya gobolka, iyagoo ka hortagaya dadka inay saameyn ku yeelato xaalad sidan oo kale ah oo ay gabi ahaanba iska indha tirayaan sababaha.
Xadid adag ayaa loo sameeyay dhibaatooyinka qaar ee ka dhashay dib u habeyntii shaqaalaha ee 2012, heshiiska ayaa ka hortagaya badashada heshiisyada shirkadaha adeegga badan.
Qaar ka mid ah awoodaha ay adeegsadeen guddiga wadajirka ah ee heshiiskaTani waxay ka caawineysaa gorgortanka wadajirka ah ee waaxda inuu ahaado mid firfircoon.
Heshiiska dhexdiisa sinnaan ayaa loogu damaanad qaaday dhammaan shaqaalaha, iyadoo aan loo eegin jinsiga, da'da, jinsiyadda ama jinsiyadda uu qofku ka tirsan yahay. Tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ayaa loo qaadaa si xeerarkaas looga dhabeeyo takooridda loo qabo dadka iyadoon loo eegin cidda ay yihiin.
Sababaha hor istaagay heshiiska wadajirka ah
Qaar ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee sababay dib u dhaca saxiixa heshiisyada ayaa isla markiiba la xaliyay. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kuwa kale oo ugu adkaa hagaajinta.
Khilaafka ayaa sababay Farqiga u dhexeeya mushaaraadka guud wuxuu ahaa sababaha ugu muhiimsan ee sababay isku dhaca heshiisyada dhexdooda, iyo sidoo kale sharciyeynta kala-sareynta, maadaama laga soo bilaabo 2015-dii Janaayo, 2007 ay jirtay kaalmo siyaado ah waana la isku raacay tan iyo sanadka XNUMX.
Ka dib sanad iyo laba bilood oo gorgortan iyo shirar badan ah, heshiis ayaa la galay kaas oo markii dambe horseed u ah in la saxeexo heshiis wadareed Waxaa saxeexay guddiyada shaqaalaha, oo ay xaq u leedahay CCOO, oo haysta 70% gorgortanka.
Qaybta biraha waxay horey uheshay heshiis wadareed cusubKa dib markii ay saxeexeen ururada shaqaalaha, heshiiskan waxaa ka mid ah kordhinta mushaharka dhammaan shaqaalaha magaalooyinka kala duwan ee Isbaanishka ama gobollada, taas oo ah wax si muuqata u danaynayay dadkaas ka shaqeeya qaybta birta.
El heshiiska wadajirka ah ee biraha si togan ayay u saamaysaa dad badan, shaqaale badan oo ku hawlan
Hawlo kala duwan oo ka socda qaybta biraha, iyada oo kordhinta mushaharka iyo ixtiraamka xuquuqda aadanaha, nolol wanaagsan ayaa loo xaqiijiyey shaqaalaha tan iyo markii heshiisyada la kala saxiixday.
Heshiisyadu waxay suurtogal ka dhigayaan in laga soo kabto jawiga wanaagsan ee shaqada si loo qabto amarro cusub loona kordhiyo biilka. Heshiisyadan ayaa aasaas u noqon doona wadahadalo cusub mustaqbalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Shaqada » Heshiisyada shaqada ee wadajirka ah ee birta ee Isbaanishka
Raadinta faa'iidooyin sare ayaa faa'iido u leh keydkeena?
Qiimayaal leh karti badan oo koritaan